Indawo yokuhlala yase-Ermete - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yase-Ermete
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFranco
Isakhiwo esiqhelekileyo saseSalento seminyaka yee-1700s yabuya yabuyiselwa ngokubuyiselwa kunye nokugcinwa kweempawu zeenkwenkwezi, umgangatho wecocciopesto wokwenyani kunye nomqolomba onomtsalane. Ifakwe entliziyweni yeBorgo Antico kwintendelezo ezolileyo nenkulu ukuze isetyenziswe ngokukhethekileyo, indlu enefenitshala yoyilo kunye nezixhobo zixhotyiswe ngabo bonke ubutofotofo. Kukho ikhitshi elitofotofo, igumbi lokulala elizolileyo, igumbi lokuhlambela elikhulu kunye nomqolomba. Kufuphi neelwandle ezintle eLecce Otranto Leuca Gallipoli
IDimora Ermete yindlu enefenitshala kunye nezixhobo zefenitshala eziyilwe kwaye zenziwe ngumnini, izinto ezizodwa ezisisiphumo sophando olunomdla. Ibekwe ngaphakathi kwintendelezo ethe cwaka nenoxolo, indawo encinci ye-oasis yokuphumla. Indawo yangaphandle inkulu, igcinwe kwaye isetyenziselwa kuphela iindwendwe. Ungatya kamnandi, uphumle emva kwesidlo sangokuhlwa kwaye ube nebarbecue entle. Ungena endlwini kunye nentendelezo ngeenyawo usuka kwi-arch eqaqambileyo, emva koko untywiliselwe kwindawo engaphandle ejikelezwe zizityalo zaseSalento, kukho ukuthula kunye nokuba ngasese njengoko kungekho ndlela yabantu okanye iimoto.
Indlu inendawo ehle kakhulu, kunye namanyathelo ambalwa ngeenyawo ungafikelela kwi-Marchesale Palace, i-Piazza San Giorgio, unokutyelela ii-oyile ze-Ipogei, izitalato ezimhlophe eziqhelekileyo, i-alleys. Kwaye kwi-aperitif kunye nesidlo sakusihlwa kukho iindawo zokutyela ezigqwesileyo. Ngalo lonke ixesha kufutshane nendlu kukho iivenkile kunye neevenkile ezinkulu.
Nanini na xa kunokwenzeka iya kuluyolo lwam ukwamkela nokwamkela iindwendwe ngokobuqu